(Qondaalaa, 7/05/2020) WBO Zoonii Kibbaa keessa socho’u, humna mootummaa Abiy irratti injifannoo galmeessuu ibse. - Kichuu
HomeAfaan OromooNews(Qondaalaa, 7/05/2020) WBO Zoonii Kibbaa keessa socho’u, humna mootummaa Abiy irratti injifannoo galmeessuu ibse.
WBOn Injifannoo Galmeesse
Ibsi WBO Zoonii Kibbaa irraa bahe akka hubachiisutti, WBOn Zoonii KIbbaa, tarkaanfii Guyyaa Kaleessaa-Caamsaa 6 bara 2020, godiina Gujii bahaa keessatti tarkaafii fudhateen waraana mootummaa Abiy agrii ajjeesee, garii immoo madoo godheera.
Akak ibsa kanaatti, lolli kun guyyaa kaleessaa 6 / 05 / 2020 guyyaa keessaa sa’aa 12 : 30 pm ti gaggeeffame.
Lola kana irrattis waraanni koloneer Abiyyi Ahimad Godiina Gujii bahaa aanaa shaakisoo ganda magaaddoo keessatti ummata dararafuu bobba’e bakka addaa suukii jedhamutti haleelameera.
Haleellaa kanaanis lama ajjeefamee, sadii immoo madoo ta’eera; kan ahfe immoo gargari faca’eera.
Akkasumas, lola waaree boda sa’aa 2: 00 pm irratti marroo lammaaffaaf naannuma sanatti taasifameen waraana Abiy irraa sadii ajjeefamaniiru; hedduu immoo madoo ta’uun marroo lammafaaf gargar faca’aniiru.
Tarkaanfii kanaanis WBOn meeshaalee hidhannoo hedduu akka dhuunfate ibsa WBO Zoonii Kibbaa irraa huntameera.
Oduu kana ilaalchisee gama mootummaa Abiyiin wanati himame hin jiru.
Oromoon waan barbaadu harka isaatin godhata malee ormarraa hin eeggatu.
Maqaa amantaatin lafa Oromoo saamuun dhabbachuu qaba…
#Koloneel Gammachuu Ayyaanaa